Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चीनको दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेकी उच्च अधिकारी मेङ क्यानडामा पक्राउ – Emountain TV
एजेन्सी, २० मंसिर । चीनको दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेका संस्थापककी छोरी एवं कम्पनीकी उच्च अधिकारी मेङ वान्झाउलाई क्यानडामा पक्राउ गरिएको छ । बान्झाउलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने तयारी भइरहेको क्यानडाका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चीनले भने उक्त पक्राउ र दुर्व्यहारप्रति आपत्ति जनाएको छ । वान्झाउ हाल हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत रहेकी छिन् । इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दीको हुवावेले अवज्ञा गरेको आरोपमा अमेरिकी अधिकारीहरुले अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ ।
अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरुले हुवावेका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको र उक्त कम्पनी राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले खतरापूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापारिक तनावका सन्दर्भमा तीनमहिने युद्धविराम गरेको केही दिनभित्रै नयाँ विवाद सतहमा आएको छ ।
दुवै देशका व्यापार मध्यस्थकर्ताहरुमाथि तीन महिनाभित्र असमझदारीहरु हटाउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । बान्झाउको गिरफ्तारीसँगै एसियाली सेयर बजारमा त्यसको असर देखिएको छ । साङघाइ र हङकङको सेयरबजारमा गिरावट आउनुका साथै प्रविधि क्षेत्रको सेयरमा मन्दी छाएको छ ।
क्यानडाको न्याय मन्त्रालयले एक वक्तव्यमा मेङलाई भ्यानकुभरबाट डिसेम्बर १ तारिखमा गिरफ्तार गरिएको जनाएको छ ।